Iphupha malunga notshintsho lomsebenzi ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukutshintsha kwemisebenzi kunokubangela uchulumanco olukhulu. Into entsha iqala ngayo yonke into engalindelekanga. Ngalo lonke uvuyo kwisiqalo esitsha, omnye uyazibuza ukuba ingaba sisigqibo esifanelekileyo na.
Abantu abaninzi bafuna umsebenzi omtsha. Nokuba umdala, ulutsha olusaya esikolweni kwaye lufuna ukusebenza ngexesha leeholide zasehlotyeni, umfundi owenza isibonelelo sokuziphilisa ngokufunda okanye umntu oqeqeshwayo: umsebenzi kufuneka ngaphezulu kwako konke ube nomvuzo onomdla kunye neeyure zokusebenza ukuze zilandelane ngokulandelelana iyahambelana nendlela yokuphila. Ulwazi malunga nezithuba lunokufumaneka, umzekelo, kwibhodi yomsebenzi, intengiso yamaphephandaba okanye iingcebiso. Ngamanye amaxesha abantu bakhangela umsebenzi wokufundela ixesha elifutshane ukufumana amava omsebenzi kunye nokugqibezela ukuqhubeka kwakhona. Utshintsho lomsebenzi okanye ukukhangela umsebenzi kuhlala kukhokelela ekubhalweni kwesicelo kunye nenkcazo yobuqu yenkampani.
Ithetha ntoni isimboli yamaphupha kuwe xa uphupha ngokutshintsha komsebenzi? Ithetha ntoni intsingiselo yamaphupha?
1 Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha "utshintsho lomsebenzi" lubonisa iphupha kulo umnqweno ube nempumelelo kwi el mundo uvuka wedwa. Awufuni kuxhomekeka kakhulu kwabanye. Ukuba iphupha kukukhangela umsebenzi wokutshintsha imisebenzi ephupheni, unokulindela ingeniso kwintlanganiso emangalisayo kwilizwe elivukayo.
Ukuba uphawu lwephupha "utshintsho lomsebenzi" lubonakala xa uphupha, nangona wanelisekile ebomini bokwenyani, oku kungangathi kufana isicelo ukuba iqondwe. Umphuphi kufuneka azibuze ukuba ngaba wanelisekile ngenene ngobomi bakhe bangoku. Usenokuba ubungalwazi udandatheko lwakho ukuza kuthi ga ngoku kwaye ngoku kuyabonakaliswa kutshintsho lomsebenzi wephupha. Nangona kunjalo, uphawu lwephupha alunyanzelekanga ukuba lujolise kuphela kwindawo yobungcali kwihlabathi lokuvuka. Isizathu sinokufunyanwa ngasese.
Ukuba utshintsho lomsebenzi lukhatshwa yimvakalelo yokungoneliseki njengophawu lwephupha, ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha. imfuno engxamisekileyo yamanyathelo iyimfuneko. Iphupha linqwenela ukuvusa ubomi utshintsho kwindawo yobomi. Akufanele ubeke oku kude.
Ukuba iphupha lijonga omnye umntu xa etshintsha imisebenzi ephupheni, oku kubonisa Bona okanye iimvakalelo ezingalunganga ngalo mntu ebomini bokuvuka. Ukuphupha ayifuni ukuba nento yokwenza nalo mntu.
Ukuba iphupha liziva livakalelwa kakhulu xa utshintsha imisebenzi ephupheni, uhlala uyifumana kwilizwe elivukayo. akukho mandla Ukutshintsha. Ngenxa yoloyiko, ushiya yonke into njengoko yayinjalo, nangona yeyona nto imbi kuye.
Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, inokuba sisimboli yamaphupha «utshintsho lomsebenzi». ikhonkrithi unobangela Nika, kuba ukuphupha malunga nokutshintsha imisebenzi okanye ukufaka isicelo. Ingqondo yakho eqondayo iyaqhubeka nokukhathazeka malunga notshintsho lomsebenzi olulandelayo kwilizwe lokuvuka.
Kwelinye icala, uphawu lwephupha "utshintsho lomsebenzi" lunokucela iphupha ukuba lingachithi xesha. Kuya kufuneka ekugqibeleni ucinge ngeenjongo zakho ebomini kwaye emva koko uqale ukuthatha inyathelo.
Ngamanye amaxesha utshintsho lomsebenzi njengophawu lwephupha lunokubonisa utshintsho olunqwenelekayo kubuntu bephupha. Mhlawumbi umphuphi akonwabanga ngesimo sakhe kwingingqi ethile kwaye ufuna ukusebenza kuye ngokwakhe ukuyitshintsha.
Uphawu lwephupha «utshintsho lomsebenzi» - ukutolika kokomoya
Icala lokomoya lokuchazwa kwephupha libona kwisimboli yephupha "utshintsho lomsebenzi" uphawu lwe Ubhengezo y Ubunzima yokuphupha ukuze uziqonde.